मानव सेवा नै धर्म
हामीमा नभई नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, परोपकारको भावना। परोपकार नै ठूलो धर्म हो। गरिब, असहाय, दीनदुःखीको सेवा हामी सबैले गर्नुपर्छ। उनीहरूको सेवा गर्नु नै भगवान्को सेवा गर्नु हो। भन्ने गरिन्छ, मानव सेवा नै माधव सेवा हो। संसारमा भएका सबै धर्मले यही भ...
दुवै महिला पुनः घरबाहिर निस्के। पहिलीले सुझाव दिइन्, ‘धर्म कमाउनुपर्छ नि बहिनी।’ ‘यस जुनीमा धर्म कमाए पो अर्को जुनीमा भोग्न पाइन्छ,’ अर्कीले सहमति जनाइन्।...
नागरिक दैनिक मंसिर २०७८
धर्म र राजनीति
सर्वप्रथम त म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो र यहाँहरूको फरक मतको सम्मान गर्छु। म हिन्दू सनातन धर्म मान्छु र अन्य सबै धर्मप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि धर्मप्रति मेरो द्वेष, घृणा छैन। एक वरिष्ठ पत्रकारले केही वर्षअगाडि कुनै नेतालाई अन्तर्वार्ताको क्रममा सोधे- ‘धर्म र रिलिजन फरक कुरा […]
अनलाइनखबर मंसिर २०७८
काँग्रेस महामन्त्रीले भने–देश धर्म निरपेक्ष हुँदैन
काँग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले देश धर्म निरपेक्ष हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले धर्मनिरपेक्षता शब्द ठीक नभएको पनि बताए । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भने, ‘धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द ठीक होइन । धर्म निरपेक्ष हुँदैन। न धर्म सापेक्ष हुन्छ । धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ ।’ उनले पार्टीको महाधिवेशनमा नीति र कार्यक्रमबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पनि बताए ।
‘हिन्दू धर्म र हिन्दुत्व फरक कुरा हुन्’
२६ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले हिन्दू धर्म र हिन्दुत्वबीच भिन्नता भएको बताएका छन् । शुक्रबार भिडियो कन्फेरेन्समार्फत् ‘जन जागरण अभियान’ तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राहुल गान्धीले हिन्दू धर्म र हिन्दुत्व फरक कुरा भएको बताएका हुन् । ‘हिन्दू धर्म र हिन्दुत्वबीच के फरक छ ? यी दुबै समान हुन् त ? […]
अनलाइनखबर आश्विन २०७८
बर्लिन म्याराथनमा धर्म
नेपाली धावक धर्म महर्जनले बर्लिन म्याराथनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। विश्व प्रसिद्ध म्याराथनमध्येको एक बर्लिन म्याराथनमा प्रतिस्पर्धा गर्न धर्म बिहीबार जर्मनीको बर्लिन प्रस्थान गर्दै छन्।...
मेरो भावलाई बुझेर उहाले भन्नुभयो, “खै ! मान्छेभित्रको दया, माया स्वार्थले सबै निलेजस्तो छ। मृत्यसंग लडिरहेकी किशोरी आमाको क्रन्दन कसैले सुनेनन् ? अलिकति ढिलो भएको भए, ज्यान जान सक्थ्यो। हैन बुहारी ! हर धर्म, सम्प्रदायमा आमा एकै होइन र ? कि धर्मअनुसार आमाक...
कहाँबाट आयो धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा?
नेपाल हिन्दु राष्ट्र भए पनि त्यो धर्म सापेक्षताको साँघुरो र सैद्धान्तिक घेराभित्र चलेको थिएन। नेपाल नाममा मात्र हिन्दु राष्ट्र थियो। सिद्धान्तत: धर्म सापेक्षता भनेको राज्यमाथि धर्मको निर्देशन र प्रभाव हो। कयौँ मुसलमान देशहरूमा राज्यलाई धर्मले निर्देशित गर्छ। नेपालमा हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि धर्मले कहिल्यै राज्यलाई निर्देशित या प्रभावित गरेन। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसैको सेरोफेरोमा […]
धर्म, धर्मनिरपेक्षता र राजनीति— १
लेखको सीमिततामा सामान्य धर्म र राजनीतिबारे केही जोडिएका विषयहरू ल्याउन लेखिएको लेख हो । संसारमा रहेका धर्म र राजनीति गहिरिएर बुझ्न अझै गहिरो र व्यापक अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । राजनीति, राजनीति गर्ने व्यक्ति अनि उसको राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा धार्मिक भावनाहरू जोडिएको हुन्छ, चाहे त्यो हिन्दू होस्, क्रिस्चियन, इस्लाम वा अन्य धर्म मान्ने होस् । कुनै पनि […]
दीपक भण्डारी : धर्म के हो भन्ने उत्तरको खोजीमा म मन्दिरतिर लागेँ । मन्दिरमा गएर हेरेँ, धर्म गर्ने धेरै भेटेँ तर म झन् दोधारमा परेँ अनि आफूतिरै प्रश्न तेस्र्याएँ – के उनीहरू पूर्णरूपमा धर्म गरेका छन् त ? कोही घन्टौँ लाइन लागेर मन्दिरमा दर्शन गर्न व्यग्र देखिन्थे । कोही लामो टीका लगाएर धर्म पूर्ण भएको […]
धर्म र कर्तव्य के हो ?
जुन कर्तव्य हो त्यो धर्म हो । जुन अकर्तव्य हो त्यो अधर्म हो । अर्थात् जुन गर्नुपर्ने हो त्यही धर्म हो । जस्तैस् नाकले पानी पिइन्न। जुन करणीय हो, त्यही धर्म हो र जुन अकरणीय हो त्यो अधर्म हो । धर्म भन्नाले दैवी शक्ति, परमात्मा अथवा अदृश्य शक्तिमा गरिने विश्वास र त्यस्ता शक्तिहरूसँग सम्बन्धित नैतिक […]